China Mitambo LED Ratidza P Series Manufacture uye Fekitari |AVOE
Mg Alloy Cabinet 1280*960*86mm
Module saizi: 320 * 160mm
Super light chete 26Kg
Mvura isingapindi giredhi IP65
Chikumbiro: Nhandare yenhabvu inotenderera, Basketball court perimeter, zviitiko zvemitambo, nezvimwe.
Sports field LED masikirini akakodzera kwazvo nzvimbo dzine vanhu vakawanda, kunyanya kunhandare dzenhabvu kana basketball.Yayo yakakwirira-resolution mifananidzo uye yakakura yekuona angles inovimbisa yakanakisa mhando mifananidzo uye mavhidhiyo kumakona ese enhandare.
Iyo Sports Peripheral LED Screen Display ihofori banner LED inoratidzira ine yakafara kwazvo hupamhi uye hurefu hupfupi.Iyo yeperipheral LED dhijitari yekushambadzira bhodhi inoshanda, uye inoenderera inoshambadza meseji kana Bhizinesi Logos inoratidzwa pa LED skrini painotenderera yese yenhandare yemitambo munhandare.Rudzi rwemafambiro e LED atinopa nhandare yenhabvu iri nyore kuisa nekubvisa.Iyo LED skrini haina mvura uye inogona kudzivirira chero nharaunda yenhandare (senge mvura, mvura, guruva) kupinda.
1. IP65 isingapindi mvura, anti-ultraviolet, mhepo inodzivirira, inodzivirira kudengenyeka kwenyika
2. Base chimiro chinogadziriswa, simbisa zvirinani mitambo yekutarisa kubva kune akasiyana ekuona kona
3. Mg Alloy die-cast cabinet, nhete uye isingaremi, furo rakabviswa, rinogona kushandisa pakurenda danho re LED.
4. Soft mask kudzivirira, chengetedza muviri wemutambi kuti usakuvadza uye mwenje we LED hauna kunyanya kuputsika
1. Outdoor Sports Field LED Screen Ratidza
1. Sikirini Yakakura & Electronic SCOREBOARDS
Sponsor kushambadzira, mhepfenyuro yevhidhiyo, ruzivo rwakakosha, uye Brand Logos inogona kuratidzwa pane yakakura LED skrini.Ehe, ivo vanogona zvakare kushandiswa sebhodhi rezvibodzwa.Iwe unogona kuvaka skrini hombe kuti ikwane nhandare yako yenhandare.Iwe sarudza chimiro uye saizi.
LED yeperipheral display screen inogona kushandiswa kuratidza akawanda kushambadzira mumutambo mumwechete, uye mubatsiri wako anogona kushandura ruzivo rwayo zviri nyore, nokudaro achigadzira pfungwa itsva yevatsigiri.
2. Kudzivirirwa Kwenyanzvi
Special Eva kuchengetedza cushion pamusoro pekabati yeLED kuchengetedza vatambi venhabvu kubva mukukuvadzwa panguva yemitambo.Silicon rabha mask nekupfava kwayo uye kuchinjika kudzivirira mutambi nemabhora kubva mukukuvadzwa.Muviri wakagadzikana unodzivirira chiratidziro kubva kune chero kukanganisa, kunyangwe bhora rekumhanya-mhanya kana bhora renhabvu.
1. Zviri Nyore Kutakura
Iyo yemitambo nhandare ye LED inoratidzira skrini ine yakasanganiswa yekumashure yekudhonza bracket, iri nyore pakufambisa uye kuisirwa.Ingo dhonza bracket pasi uye iyo yemitambo nhandare ye LED kuratidza skrini inogona kutsigirwa pasi.
Iyo yemitambo nhandare ye LED skrini ine yakakura yekuona kona ye140 °, iyo inogona kutariswa nevazhinji vateereri.Hunhu hwemifananidzo hunoramba husina musono mumativi ese nemadaro, zvichiratidza zvakafanana zvemhando yepamusoro kune vese vateereri.Izvi zvinoita kuti zvikodzere kuungana kukuru.
4. High IP Level & Yakachengeteka & Yakavimbika
Iyo SMD P8 kana P10 yekunze yemitambo nhandare ye LED inoratidzira yakanyatso gadzirirwa kusapinda mvura, guruva-uchapupu, uye UV kuchengetedzwa kuti ive nechokwadi chisina kukanganiswa kushandiswa kwekunze.Iyo yakakwira IP chiyero inovimbisa yemhando yepamusoro kuburitsa chero mamiriro ezvinhu.
Kupenya Kwepamusoro & Hunhu Hwepamusoro
Iyo yemitambo field LED skrini ine mabasa epamberi senge kupenya pamusoro pe6000cd/sqm.Gadzirisa kupenya maererano nenzvimbo yekuisa (Sarudzo).
Packing & Transfer
Kuti udzivise kukuvara kune chigadzirwa panguva yekufambisa uye kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwechigadzirwa, chakaiswa muFlight Case kuitira kuchengetedza uye kutamisa zviri nyore.
Zvakapfuura: Rental LED Ratidza R Series
Zvinotevera: Nhandare ye LED Display
Ruvara Sport Led Display
Yakakura Led Display Yemitambo
Led Kuratidza Kwemitambo
Kunze Sport Led Display
Outdoor Sports Display
Outdoor Sports Led Display
Kunze Sports Led Screen
Sports Field Led Display
S2 Kutumira Kadhi
LED Module 45 degree angle
P5 Kunze kwe LED Module B
MSD300 Kutumira kadhi
Led Sign Kunze Led Display Led Display Screen Led Screen Led Display Kunze Led Screen